Momba anay - Fujian Snowman Co., Ltd.
Fanaraha-maso ny vidiny
Snowman dia manolo-tena amin'ny fikarohana sy ny famokarana rafitra fanamafisam-peo vita amin'ny beton, chillers rano, fitehirizana ranomandry ary milina ranomandry hafa. Ny vokatray lehibe dia misy: chillers indostrialy, milina ranomandry Flake, milina ranomandry Tube, masinin-dranomandry Block, milina ranomandry Plate, ary rafitra fanamafisana Concrete. Ny milina fitehirizanay dia natao ho an'ny vokatra isan'andro, manomboka amin'ny 0,5 taonina ka hatramin'ny 80 taonina. Ho an'ny rafi-panamboarana ranomandry lehibe, toy ny rafitra fanamafisana ny beton, Snowman dia afaka manome endrika feno ihany koa, arakaraka ny filanao manokana.
Snowman koa dia nahazo ny IS09001, IS014001, 0HSAS18001 ary ny CE Certification, nahazo ny Pressure Vessel Ⅰ, Ⅱ, Ⅲ Designing and Manufacturing Licence, PED & ASME Designing ary Fahazoan-dàlana momba ny famokarana, fahazoan-dàlana amin'ny fantsom-pamokarana GC2 / GC3 famolavolana sy fahazoan-dàlana ho an'ny famokarana, fahazoan-dàlana hametrahana fantsom-bokatra fantsom-bokatra GC2, taratasy fanamarinana momba ny fanadihadiana amin'ny sambo,Taratasy fanamarinana mipoaka ary koa fahazoan-dàlana fahazoana kilasy faha-2 amin'ny fifanekena momba ny injeniera ankapobeny sy ny herinaratra.
ISO9001 fanamarinana rafitra kalitao iraisam-pirenena Fanamarinana OHSAS 18001
Fanamarinana PED fanamafisana
Fanamarinana CE ho an'ny Unit Compressor SRM
Vondron-tsolika fanitarana visy WST sy Unit Compressor
ASME taratasy fanamarinana fanamarinana
P1001-112-I-08 (andian-tantara WNG) P1001-112-I-09 (andiany YF)
P1001-112-I-10 (andian-dahatsoratra YF-XR) fanamarinana CE
Snowman dia mikendry ny hanome ireo vahaolana mangatsiaka avo lenta amin'ny vidiny ambany indrindra. Voahodidin'ny safidy fitaterana toy ny seranam-piaramanidina, seranan-tsambo ary làlambe, afaka manome ny vidin'ny fandefasana entana farany ambany indrindra amin'ny mpanjifanay izahay. Manana tsipika famokarana haingam-pandeha ho an'ireo vokatra be mpitia indrindra koa izahay. Miaraka amin'ny vidin'ny fandefasana entana ambany sy amin'ny famokarana haingana, Snowman dia afaka manome vahaolana fanaovana ranomandry amin'ny vidiny mirary.
Na aiza na aiza misy vokatra Snowkey dia misy serivisy Snowman. Ny kojakoja rehetra ananantsika dia omena fiantohana iray taona farafahakeliny ho fanoloana na fanamboarana maimaimpoana. Snowman dia manome serivisy ho an'ny mpanjifa tontolo andro ho an'ny mpanjifanay. Miaraka amin'ny ekipa serivisy aorian'ny fivarotana voaofana, Snowman dia afaka manome anao ny vahaolana tsara indrindra amin'ny fotoana fohy, raha sendra manana olana ianao.
Snowman dia mahavita manamboatra milina gilasy 5000 isan-taona. Noho ny fampiharana malalaka sy ny vidin'ny vidinay dia nahazo laza be izy ireo tany Amerika, Kanada, Afrika Atsimo, Nizeria, Torkia, Brezila, Kiobà, France, Russia, Singapore ary maro hafa. Miaraka amin'ny fangatahana tsy tapaka ataon'ny vokatray eny an-tsena, i Snowman dia miezaka ankehitriny ho lasa orinasa mahomby amin'ny angovo kokoa.
Ao amin'ny Snowman, manome tolotra OEM ihany koa izahay rehefa angatahina. Aza misalasala mifandray aminay raha mila fanazavana fanampiny.
Hatramin'ny niorenantsika dia nanintona olona sy injeniera marobe i Snowman. Vokatr'izany dia nanangana ekipa matihanina efa za-draharaha isika izay nahazo patantam-pirenena 6 ho an'i Snowman.
Snowman dia mivelatra amin'ny sain'ny antsipiriany. Ny singa tsirairay amin'ny rafi-pitabatabana dia arahi-maso tsara, mba hifanaraka amin'ny fenitra ISO9000. Ho fanampin'izay, 80% n'ny kojakoja fanorenan-dranomandry Snowkey no nafarana. Izany no ahafahantsika manolotra ny rafitra fihenan-tsakafo tsara indrindra.
Fitaovana solika (WNG33.7) Mpisaraka solika (YF600)
Taratasy fanamarinana fisarahana solika (YF-XR26L） fanamarinana CE
Masinina misy ranomandry (habe kely) no manakana ny milina ranomandry
Kitapo fitehirizana ranomandry mandeha ho azy fanamarinana CE
Ice board Air cooled, Cooled ny rano, Single）
Fantsona famatrarana, SRM andian-tsarimihetsika open compressor CE fanamarinana
Taratasy fanamarinana ho an'ny rafitry ny vata fampangatsiahana milina ranomandry
Taratasy fanamarinana ho an'ny famolavolana condenser
Fanamarinana fanamarinana ho an'ny fananganana milina ranomandry paompy fanamarinana CE
Sivily fanamarinana fanamarinana GLQ (MX) 240 (CE)
Taratasy fanamarinana famolavolana ho an'ny EvaporatorGK82.5
Fanamarinana ny fitsapana ho an'ny famolavolana CondenserWNF132
Taratasy fanamarinana ny famolavolana ny toekarena ZL-XR26M-A
Andiany P-1001-112-I-16 GYF
Rafitra fitahirizan-drano WZF, LZF, GZA） fanamarinana CE
SW andian-tsoratry ny vata fampangatsiahana SW
SRC 134 andian-tsarimihetsika (compresser amin'ny vata fampangatsiahana semi-voaisy tombo-kase)
SP series compressor (compressor piston semi-closed) fanamarinana CE
Fanamarinana fanaraha-maso ny famolavolana solika (YF300, YF350, YF500)
Fanamarinana fanamarinana ny famolavolana fitaovana telo
Fanamarinana fanamarinana ny rafitra fampangatsiahana
Volavola fanamafisana angovo sy fitehirizana CE fanamarinana